Alahady 22 novambra 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahadin’ny ZANAKA AM-PIELEZANA
“Ary Asa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe: Jehovah ô, tsy misy afa-tsy Hianao no mahavonjy ny tsy manan-kery, raha iadian'ny maro izy, ka vonjeo izahay” . 2Tantara 14: 10
Arahabaina etoana isika mpianakavin’ny Finoana nahatratra indray ity andro androany ity ahafahantsika midera sy manompo ny Tompo eto an-tranony. Ny fotoana androany dia natokana indrindra ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Zanaka Ampielezana . Natao indrindra izany ho fitondrana am-bavaka azy ireo ary natao ho andro fanateram-bokatra ihany koa izany . Ny fotoana androany ihany koa dia natokana ho Alahadin’ny Komitim-pirenena miady amin’ny sida eo anivon’ny FJKM. Anio dia mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO” isika.
Ny litorjia faharoa fampiasa eto anivon’ny FJKM no notanterahina.
Amin’ny maha Alahadin’ny Zanaka am-pielezana ny andro androany dia izy ireo no niandraikitra manontolo ny fitarihana ny fanompoam-pivavahana .
Ramatoa RAJAONARISON Sahondra no nitarika ny fanompoam-pivavahana.
Ny Mpitandrina miana-draharaha eto amin’ny Fitandremana kosa izay tsy iza fa ny zanaky ny Fiangonana dia Ramatoa RAMILISON Diamondra Mpitandrina no nitory ny tenin’Andriamanitra
Ny Salamo faha 100 no nentin’ny Fiangonana nidera sy nankalaza an’Andriamanitra : “ Mihobia ho an’i Jehovah, ry tany rehetra.
Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana; Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana.
Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra; Izy no nanao antsika, ary Azy isika, Dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana, Ary eo an-kianjany amin’ny fiderana; Misaora Azy, mankalazà ny anarany,
Fa tsara Jehovah; Mandrakizay ny famindram-pony, Ary mihatra amin’ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany.Amen”
Ny hira faha 24 and. 1,5 : “Ny Lanitrao ao ambony ao” .no noredonin’ny Fiangonana avy eo.
Teo amin’ny vavaka Fideràna no nanehoan’ny mpitarika izao fideràna izao : “Ry Andriamanitra Raiany ô! Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Ianao, misaotra sy midera ary mankalaza ny Anaranao masina izahay fa noho ny fitiavanao manana amby ampy dia mbola omenao tombon’andro fahafelomana ka feno fifaliana tafahoana aamin’ireto ray amandreny sy namana ary havana eto Amparibe Famonjena. Misaotra Anao satria fitsapana lalina sy navaivay no niainanay nandriatry ny volana maromaro, tao ireo narary ary nahazo fanasitranana , ao ireo mbola tsaboina ary nisy mihitsy ireo namoy ny ainy, fiainana tsy maintsy lalovanay izany ary efa hanefenao anay isan’andro ny ahazakay izany. Tsy miafona Aminao anefa ny tsy fahatanterahanay koa menatra sy mangaihay izahay miseho eo anatrehanao koa raiso Tompo ny fifonanay mpanomponao, mamelà ny helokay fa izany no efitra mampisaraka anay Aminao. Diovy izahay mba ho afaka heloka ka tsy hangozohozo fa hatoky Anao tsy amin’ahiahy ary ho vavolombelona sy ho fianarana ho an’ny hafa manodidina anay. Hanahaka Anao Kristy amin’ny asa tsara apetrakao aminay tsirairay avy fa izany no ahazoanay antoka sy iandrandranay famonjena avy Aminao. Amin’ny Anaranao Jesoa Krsity no hanandratanay ny vavaka. Amen”
I zoky Onimalala RAKOTOZAFY mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha 2 no nanatanteraka izany .
Ny hafatra dia araka ny EKSODOSY 20:12 “ Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao ho anao ”
Izy dia nanentana ny ankizy sy ny Mpianakavin’ny finoana mba hanaja ny ray aman-dreny ary nisy ny tantara kely nentina nanohanana izany dia ny nitantaran’ I Jesoa Krsity teo amin’ny fahazazany .
Rehefa izany dia nitsangana avokoa ny fianakaviam-be ny Sampana Sekoly Alahady namerina ny tenin’ny Soratra Masina natao ho tadidy amin’ity herinandro ity ary nisy ny vavaka nisaorana an’Andriamanitra noho ny teny, ny fangatahana fitahiana ho an’ny ray aman-dreny .
Mialoha izany dia natao ny hira 205 : 1,4 “ Ny teninao rehetra” ary mbola nisy ny vavaka ho an’ny tenin’Andriamanitra .
Ny mpikambana ao amin’ny Zanaka Am-pieleezana no nanatanteraka ny famakiana ny Soratra Masina sy Nitari-bavaka mialoha ny famakiana izany ka RAZAFINDRALAMBO Andrinirina no nitari-bavaka , RANDRIAMANANA Toky Tsitohaina no namaky ny Testamenta Taloha , RAKOTONIRAINY Josie no namaky ny Filazantsara ary RABAONARISON Andry no namaky ny epistily.
Ireto ny PERIKOPA : 2 Tantara 14: 10-14 / Marka 7 : 24-30 / Filipiana 3 : 17- 21
Mialoha ny toriteny dia nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira 786 : 1,4 “Tenao Jehovah izay Ianaranay”
Ny mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitory ny tenin’Andriamanitra ka ny boky araka ny 2 Tantara 14: 10-14 no nitondrana ny hafatra.
Araka ny lohahevitra izay mbanjinina amin’iy volana ity dia azo hambara fa ny olona rehetra dia samy misedra ady sarotra avokoa ka samy mitady sy miandrandra famonjena avokoa.
Ho antsika Kristiana dia mazava fa miandrandra famonjena avy amin’ny Tompo isika. Tsy mandeha ho azy anefa izany fa andeha isika haka lesona amin’ny nataon’I Asa mpanjaka araka izay voalaza amin’ity perikopa voalahatra anio ity.
I Asa dia mpanasitrana no heviny. Izy no mpanjaka fahatelo teo amin’ny firenen’I Joda. Nandrava ny karazana sampy teo amin’ny Joda izy ary nandry fahizay ny taniny.
Raha nihatrana hiady tamin’ny firenena Ethyopiana izy dia nahatsapa I Asa fa tsy mifandanja ny hery teo amin’ny sy ny fahavalony fa lavitra dia lavitra ny elanelana misy eo amin’ny isan’ny miaramilany sy ny mpifanandrina aminy. Teo anatrehan’izany dia nanankina ny heriny tamin’ny Fivavahana tamin’Andriamanitra I Asa ka izany no nanavotra azy.
Inona ary no lesona raisintsika amin’izany ?
NY KRISTIANA MIANDRANDRA FAMONJENA DIA MIANTSO VONJY AMIN’NY TOMPO (and 10a)
Raha nikasa ny hanafika azy ny ethyopiana dia tsy nisalasala izy nitady vonjy tamin’Andriamanitra.
Tamin’ny finoana tanteraka an’Andriamanitra no ninoany fa Andriamanitra dia mahavonjy azy na dia vitsy an’isa manoloana ny fahavalony aza izy.
Andriamanitra irery ihany no mahavonjy antsika manoloana ny ady sarotra.
Ny fiatorahantsika amin’ny Tompo dia miteraka fitahiana ho an’ny olona hafa ihany koa .
Ho antsika ary dia ahoana kosa no ataontsika manoloana ny fisedrana mahamay andalovantsika.
Moa va hitady vonjy amin’olona isika sa hitady vonjy amin’Andriamanitra. Tsy misy mahadiso ny mitady vonjy amin’ny olona fa ny tokony atao voalohany dia ny miantoraka amin’ny Tompo sy mitady vonjy amin’ny Tompo. Mazava izay voalaza ao amin’ny salamo faha 120.
Aza misalasala fa sahia mitaraina amin’ny Tompo fa hamaly antsika izy, toa ilay vehivavy tsy nitsahatra nangataka tamin’ny Tompo satria narary ny zanany .
NY KRISTIANA MIANDRANDRA FAMONJENA DIA MIANKINA SY MANDEHA AMIN’NY ANARAN’NY TOMPO
I Asa dia nandeha sy niankina tamin’I Jehovah (and. 10b). Nino izy fa azo hiankinana ny anaran’I Jehovah, Mahery ny anaran’I Jehovah izay hivavahany. Toe-panahy tokony hananantsika izany toe-panahy izany dia ny mandeha amin’ny anaran’I Jehovah . Aoka isika tsy hiantehatra amin’ny herintsika na ny fahefantsika na ny fahaizantsika fa aoka isika andeha amin’ny anaran’I Jehovah ary manamafy izany ny tantaran’I Davida sy Goliata, maneho fa I Davida dia tsy nandeha tamin’ny heriny fa nandeha amin’ny anaran’I Jehovah ary dia nandresy an’I Goliata izy.
Ho antsika ary dia omen’ny Tompo ny vahaolana , miankina Aminy ary aza mandeha amin’ny herin’ny tena fa mandehana amin’ny anaran’I Jehovah fa sambatra izay olona mialoka amin’I Jehovah (Sal 34: 9)
Taorian’ny toriteny dia nanatanteraka ny anjara hirany ny RFF
HIRA RFF : “Gaga” hira izay noforonin’I George Andriamanantena.
Ny fanekem-pinoana faha efatra fanaon’ny Fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahan’ny Fiangonana.
Rtoa RAKOTOMANANA Andrimbazotiana no nanatanteraka izany ka ny Salamo faha 70 : 4 no nentiny niarahaba ny Fiangonana sady nanonona ny fiadanan’ny Tompo fa indrindra ho an’ny Zanaka am-pielezana.
Nambarany fa ity Alahady ity dia alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Zanaka Ampihelezana.
Hofaranana anio ao Antsahamanitra ny fankalazana ny faha 200 taonan’ny sekoly FJKM. Hotanterahana anio ihany ko ny fanirahana ireo mpampianatra sy mpitandrina nivoaka tamin’ny toeram-panomanana.
Hisy ny ankatoky ny fandraisana amin’ny herin’ny anio
Nanao antso ny BP ho fanampiana ireo tratry ny Kere any atsimo ka nanentana ny Fiangonana hanolotra izay foiny . hisy ny rakitra am-baravarana ho famenon’ izany amin’ny herin’ny anio.
Hanatanteraka ny fivoriambe faharoa ny sampan’asa AFF rahampitso Alatsinainy 23 nov. 2020 amin’ny 6 ora hariva .
Hanatanteraka famelabelaran-kevitra ny Hasin’ny Famonjena manomboka ny Alatsinainy faha 30 Novambra ka hatramin’ny Alahady faha 6 Desambra izao ao anatin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 50 niorenany
Nisy ny fanentanana notanterahan’ny Vaomieran’ny Vola mahakasika indrindra ny iray volan’ny voka-dehibe ka Ramatoa RABEMASO Mialisoa no nanatanteraka izany. Manomboka anio izany vokadehibe izany ka mifarana ny Alahady 27 Desambra 2020. Ny ivony dia ny andro krismasy 25 desambra 2020.
Raha nandray fitenenana kosa ny mpitandrina dia niarahaba ny Fiangonana. Niantso ny mpianakavin’ny Finoana ho amin’ny fidirana ho KATEKOMENA
Nisy zanaky ny Fiangonana niroso tamin’ny fanambadiana Kristiana dia : Atoa RAMANIRAKA Nomena sy Rtoa RANDRIAMIHAJA Malalatiana izay nohamasinina teto amin’ny Fiangonana.
Nisy ny fanoloran-jaza dia ny zaza RAMILISON Antsa Ny Aro teraka ny 29 Ok 2020 teto Antananarivo , zanak’I RAMILISON Fanomezana sy Rajaona Vola Harinala
Teo amin’izany no nanatanterahan’ireto mpianakavin’ny finoana ny voadiny sy ny fisaorana an’Andriamanitra araka ireto manaraka ireto
Tao ny nahazo fara sy dimby ary nahatanteraka ny fanoloran-jaza
Tao ny nagata-bavaka noho ny zanany hanatanteraka fanadinana
Nisy ny nisaotra ny Tompo noho ny fahafana ny fanadinana Baccalauréat
Teo ihany koa ny nisaotra ny Tompo noho ny fitantanany fiainany
Fianakaviana iray nisaotra an’Andriamanitra noho ny Fitiavany.
Ireo Hira natao : 476 /2 – 20 /1 -FF14 /2- 248 /1
FANOLORANA NY RAKITRA :
Taorian’ny fanononana ireo voady sy raki-pisaorana dia niroso tamin’ny rakitra ny Fiangonana.
Ny hira 441 : 3 “Raiso ny fahaizako” no notanterahina ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena ho an’ny Tompo.
Tao anatin’ny vavaka fangatahana no nanambaràn’ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra ny fangatahana ny Tompo ny mety mahasoa ny fianan’ny vahoakan’Andriamanitra.
Mametraka am-bavaka ny FJKM, ny synoda lehibe , hitondra fanavaozana sy ny fihavaozann’ny Fiangonana.
Nivavaka ho an’ny KPMS
Nivavaka ho an’ny marary rehetra na ara-batana na ara tsaina na ara-panahy
Nivavaka ho an’ny Zanaka Ampihelezana, tsy hanadinony ny fampianarana ary hijoro vavolomebona ho an’ny Tompo.
Nivavaka ho an’ny Mpitandrina syn y rafitra izay misy eto anivon’ny Fiangonana.
Nivavaka ho an’ny asa sy ny ezaka maro toa ny vokadehibe.
Nivavaka ho an’ny Mpianakavin’ny Finoana rehetra.
Nivavaka ho an’ireo izay nanolotra ny raki-pisaorany sy nanatanteraka ny voadiny teo amin’ny Tompo.
Nivavaka ho an’ireo tratry ny kere any an-tsimo.
Taorian’izany dia niroso tamin’ny fanatanterahana ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny Fiangonana ka ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra ihany no nitantana izany niaraka tamin’ireo Diakona ao amin’ny vaomieran’ny Vola.
Mialohan’ny namaranana ny fotoana dia niroso tamin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo isika notarihin’ny Mpitandrina miana-draharaha.
Natao ny FFPM 543 and 1 dia novakiana ny tondrozotra 2020 ary taorian’izany no nametrahana ny Tsodrano.
Ny hira namaranana ny fotoana dia ny FFPM 351 : 1
Mpitendry Orga : RAJAOFETRA John
Fafana : RAKOTOSEHENO Solofo
Sary : RABEMANANORO Jonathan
Feo : RAMAHERY Hasina
Fanamafisam-peo : RAMAHERY Yves